Howgal Xoogan oo ka socda Muqdisho & W/Gaashaandhiga oo ka careysan Weerar lagu soo qaaday. | Balanbaalis.Com	Howgal Xoogan oo ka socda Muqdisho & W/Gaashaandhiga oo ka careysan Weerar lagu soo qaaday. – Balanbaalis.Com
Howgal Xoogan oo ka socda Muqdisho & W/Gaashaandhiga oo ka careysan Weerar lagu soo qaaday.
Ciidamada Militariga, ayaa xaafadda Oodwayne ee Degmada Dayniile, waxa ay ka wadaan hawgal ammaanka lagu xaqiijinayo, kadib markii xalay weerar lagu qaaday xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya.
Weerarkii xalay oo ku bilowday bambada nooca gacanta laga tuuro, ayaa waxaa xigay rasaas xooggan oo ay iswaydaarsadeen dabley ka tirsan Shabaab iyo ciidamada ilaaliya xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya.
Ciidamada illaaliya Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa iska caabiyay weerarkii koobnaa ee ay soo qaadeen dagaalyahanada Shabaab, iyadoo markii dambe ay baxsadeen raggii hubaysnaa.
Saaka ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegayaan ciidamada oo aad u fara badan inay ku faafeen xaafaddaha dhabarka dambe ka xigga xarunta Wasaaradda difaaca Somaliya, halkaasi oo ay ka wadaan Baaritaano.
Dhalinyarada la soo qabtay ayaa indhaha laga xiray, waxaana loo waday dhanka Wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo wali hawlgalka halkaasi uu ka sii socdo.